सानिमा जनरलको आईपीओ बाँडफाँट, २ लाख ७३ हजार जनामा को-को परे ?| Corporate Nepal
सानिमा जनरलको आईपीओ बाँडफाँट, २ लाख ७३ हजार जनामा को-को परे ?
असोज ३०, २०७७ शुक्रबार ०९:४५
काठमाडौँ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण शेयर (आईपीओ) आज बिहान बाँडफाँट भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यपिटलका अनुसार बिहान ८ः३० बजे क्यापिटलको कार्यालय बबरमहलमा आईपीओ बाँडफाँड भएको हो ।
माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले गोला प्रथाबाट २ लाख ७३ हजार जनाले मात्र १०-१० कित्ता शेयर पाएका छन् । बाँकी ५ लाख ९० हजार ५ सय ४५ जनाको हात खाली भयो ।
क्यापिटलका अनुसार ५ लाख ९० हजार ५ सय ४५ जना आवेदनकर्ता भने आइपीओ हात पार्न बञ्चित भएका हुन् । कम्पनीको आईपीओमा ८ लाख ६६ हजार ९०५ जनाले आवेदन दिएकामा ३ हजार ३६० जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटलले जनाएको छ ।
तलका लिंक पनि क्लिक गर्नुहोस्ः
सानिमा जनरलको आईपीओ भोलि बिहान बाँडफाँट हुने, २ लाख ७३ हजार भाग्यमानीमा को-को पर्लान ?
सानिमा जनरलको आईपीओमा ८ लाख ८३ हजारको आवेदन, ६ लाख १० हजारको हात खाली हुने
सानिमा जनरलको ३० करोडको आइपीओ आजबाट, कति भर्ने ? कति पर्छ ?